» कोरोना कहर : किन बढ्यो विश्व वजारमा ‘हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन’ को माग !
आफुखुसी जथाभावी औषधी सेवन गर्नु कति घातक ?
सफल कुबर क्षत्री
बुटवल । केहि दिन अघि अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले काोभिड – १९ को उपचारमा दुई औषधी (Hydroxychloroquine) र Azithromycin बढि प्रभावकारि सावित हुने बताए । उनकै भाषामा भन्नुपर्दा उनले यी दुई औषधी गेम चेन्जर साबित हुन सक्ने बताए । विभिन्न देशहरूमा हालचालै भएका अध्ययनबाट पनि मलेरियाको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि क्लोरोक्विन (Chloroquine) कोभिड – १९ को सन्दर्भमा पनि सहयोगार्थ देखिरहेको छ ।
तर आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि शतप्रतिशत बैज्ञानिक पुष्ठिसहित सुरक्षित र प्रभावकारी कुनै उपचार पदत्ती पत्ता लागेको छैन । तर पनि यो माहामारिको क्षणमा कुनै औषधि छैन भन्दैमा केहि नगरी बस्न मिल्दैन । यो समयमा जुन औषधिले केही मात्रामा भएपनि सकारात्मक प्रभाव देखाएको छ , उक्त औषधि प्रयोग गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यसअघि चीन , दक्षिण कोरिया, फ्रान्स तथा विभिन्न देशहरूमा भएका अध्ययनले समेत क्लोरोक्विन कोभिड- १९ को सन्दर्भमा प्रभावकारी पाइएको छ । कोरिया वायोमेडिकल रिभ्यु नामक जर्नलमा उल्लेख गरिए अनुसार दक्षिण कोरियामा फिजिसिनहरु द्वारा निर्देशिका नै बनाएर कोभिड – १९ को उपचार थालिएको छ । उनीहरुले कोभिड – १९ को उपचारमा रिटोनावीर, लोपिनावीर र इन्टरफेरान-भिटाको मिश्रण अथवा क्लोरोक्विन सिफारिश गरिरहेका छन् ।
रास्ट्रपति ट्रम्पले इन्टरनेशनल जर्नल अफ एन्टिमाइक्रोवल एजेन्ट नामक जर्नलमा प्रकाशित लेखलाई आधार बनाइ उक्त कुरा प्रकाश पारेका थिए । तर पनि उक्त अध्ययनलाई हेर्ने हो भने उक्त खोज आफैंमा एउटा सानो अध्ययन थियोे, जस्मा मात्रै ३६ जना कोभिड – १९ भएका बिरामीहरु सम्लग्न थिए । जसमध्ये २० जनालाई Hydroxychloroquine र Azithromycin दिएर चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा विभिन्न चरणका परिक्षणबाट अध्ययन गरिएको थियो । बाकी रहेका १६ जनालाई भने कुनै पनि औषधि दिइएको थिएन । ती २० मध्ये १४ जनालाई Hydroxychloroquine मात्रै दिएकोमा बाकी ६ जनालाई भने Hydroxychloroquine र Azithromycin दुबै दिएर उपचार गरिएको थियोे । Azithromycin भने आवशयकता बमोजिम अन्य ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन नहोस् भनेर दिइएको थियो । अध्ययनको अन्तिम नतिजा अनुसार हेर्दा , जुन ब्यक्तिहरुमा Hydroxychloroquine र Azithromycin को प्रयोग गरिएको थियो , अध्ययनको अन्तिम दिनमा उनीहरुको थ्रोट स्वाबमा कुनै भाइरस देखा परेको थिएन तर जुन ब्याक्तिहरुमा कुनै औषधि प्रयोग गरिएको थिएन ती १६ मध्ये १४ जनामा भने भाइरस देखा परेको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले यो खोजलाई आफ्नो ट्विटरमा समेत ट्विट गरेका थिए । ट्रम्पको यो ट्विट संगै बिश्वब्यापीरूपमा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनको माग बढेको छ । यो औषधिले मानिसको शरीरमा भाइरसले आक्रमण गर्ने भाग नष्ट हुने र भाइरस आक्रमणका लागि आसफल तथा कमजोर हुन्छ । आम मानिसहरुले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनलाई कोरोनाको औषधि भनेर आफुखुशी खरिद गरिरहेका छन् । जस्ले गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना भएको छ ।
हरेकको घरमा औषधी सेवन गर्ने व्यक्ति हुनसक्छन् । कसैले दीर्घरोगको औषधी सेवन गरिरहेका होलान्, कतिले आपतकालिन अवस्थाका । सामान्य दुख बिमारमा पनि हामी औषधी सेवन गर्छौं । तर, औषधी सेवन गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी भने ख्याल गर्दैनौं । जसले गर्दा औषधीले थप हानी पुर्‍याउने जोखिम रहन्छ ।
औषधी सेवन गर्ने अवस्था भनेको संवेदनशिल हो । यस्तो अवस्थामा कुन औषधी, कति मात्रामा, कसरी खाने भन्ने कुरा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । जथाभावी वा आफुखुसी औषधी सेवन गर्नु घातक हुनसक्छ । अर्को कुरा जस्लाई आवस्यक पर्ने हो उसले औषधि नपाउन सक्छ , साथै दीर्घकालीन रोगहरुका औषधि लामो समय देखी प्रयोग गरिरहेका बिरामीहरुले चिकित्सकको सल्लाह नलिई यस्ता औषधि आफुखुसी सेवन गर्दा ज्यान समेत जान सक्छ।
यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखी आफै औषधि किनेर घरमा थुपार्ने काम नगरौं । रोगको शंका लागिहाले सरकारको उपचारको दायरामा आई उपचार गरौँ । यो अबस्थामा सरकारले गएको लक डाउनको निर्णयलाई सहयोग गरि घरमै सुरक्षित तबरले बसौं ।
डब्ल्युएचओका अनुसार चीन, अमेरिका, फ्रान्स, स्पेन, अर्जेन्टिना, इरान, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरियालगायतका देश अहिले बिभिन्न औषधीको महापरीक्षणमा जुटिरहेका छन् ।
आशा गरिएको छ कि अबको एक महिनामा कुनै नतिजामा पुग्न सकिन्छ । अहिले सबै समयमा खराब समाचार मात्र आएको र अब भने जुुनसुकै समयमा सकरात्मक समाचार आउन सक्छ । त्यती बेला सम्म घरभित्र सुरक्षित बस्नु नै रोग रोकथामको एकमात्र उपाय हो ।
लेखक Institute of Medicine, Central Department of Public Health महाराजगंज काठमाण्डौमा BPH अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।
पर्यटन भिसा नदिने निर्णय, भारततर्फ नाका सीमित गरिने